Inona no lazain'ny bestsellers Amazon?
Amazona no sehatra lehibe indrindra erantany ao amin'ny sehatra fampirantiana an-tserasera izay ahitana ny pejy momba ny vokatra ao amin'ny pejy tsirairay. Amazon dia mampiasa algorithm maro samihafa mba hamaritana ny antony nametrahana ity vokatra ity na amin'ny pejy manokana. Iray amin'ireo algorithm malaza indrindra Amazon dia ny Selling Rank (Bestsellers Rank).
Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fiasan'ny Amazon Selling Rank. Hanome anao fahafahana hanangana fanentanana ara-barotra mahomby ary handmart ny mpifaninana aminao.
alohan'ny hanombohantsika ny maha-zava-dehibe ny amboam-pandrefesana Amazona, dia te-hanamarika aho fa tsy mampiseho ny tsiambaratelo i Amazôna hoe ahoana no ahitan'ny Rankera Bestseller. Izany no mahatonga ny fampahalalana rehetra atolotra amin'ity lahatsoratra fohy ity dia miorina amin'ny fikarohana sy ny traikefako.
Ahoana no fomba amidihan'i Amazon amboara asa?
Rehefa hivezivezy ny pejy vokarin'i Amazon dia azonao jerena ny fizarana "Product Details". Ity fizarana ity dia mampiseho ny Amazon Bestsellers Rank. Io laharana io dia updated ora ary mifandray amin'ny isan'ny fivarotana vao haingana amin'ny vokatra, raha oharina amin'ireo vokatra hafa ato amin'ity sokajy ity. Ny Amazon Bestsellers Rank koa dia mirakitra ireo antontan-taratasy momba ny varotra sy ny fomban-javatra samihafa.
Amin'ny ankapobeny, ny laharana voalohany dia midika fa ny vokatra dia vao avy namidy mihoatra noho ny vokatra hafa amin'ny sokajy manokana.
Fahita mahazatra ny hoe ny fivarotana amboara Amazon dia mifototra amin'ny varotra, fa amin'ny isa sy ny hatsaran'ny fanamarinana na ny ratings. Raha ny tena izy, dia mitaky ny varotra (ankehitriny sy vao haingana). Izany no mahatonga azy tsy hanam-pahaizana hamoaka fanadihadiana sandoka na karama manerantany manodidina ny pejy vokatrao, indrindra taorian'ny famoahana ny algorithm farany Amazon raha toa ka nesorina avy hatrany ny fijerena tsy ara-dalàna. Noho izany, azontsika atao ny milaza fa ny Amazon Bestsellers Rank dia mampiseho fa ny vokatra manokana dia nivarotra vao haingana raha oharina amin'ny vokatra hafa ao anatin'io sokajy io ihany.
Ny angano iraisana iraisana hafa hodiavintsika dia ny vokatr'ireo vokatra tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny varotra varotra. Araka ny voalazako teo aloha, Amazon dia nanavao ny algorithms isam-bolana. Na izany aza, indraindray dia mety handany fotoana lavalava kokoa ny fampitomboana ny fivarotana sy ny fanatsarana. Amin'ny ankapobeny dia tsy mihoatra ny 3 ora ity fotoana ity. Ny zava-drehetra dia ny isan'ny varotra mifandraika amin'ny vokatra hafa amin'ny sokajy iray ihany.
Ankoatra izany, dia ilaina ny manamarika fa ny fampitomboana ny varotra dia tsy voatery midika hoe fanatsarana. Mety ho ny iray amin'ireo olana goavana indrindra momba ny lalao Amazon. Ny Amazon mivarotra laharana miankina dia miankina amin'ny vokatra hafa ao anatin'ny sokajy iray. Midika izany fa ny fitomboan'ny fivarotana fotsiny dia tsy ampy hanatsarana ny lalao. Ny fitomboan'ny isan'ny varotra dia mety hitondra anao ho Bestseller Rank. Ianao dia tokony hanangona bebe kokoa noho ny mpivarotra hafa ao amin'ny sokajinao. Noho izany, raha mandinika ny fivoaran'ny varotra ao anatin'ny sapao sy ny fangatahana avoakanao amin'ny vokatrao ianao, dia tsy midika izany fa ianao no mpivarotra tsara indrindra amin'ny sokajinao. Azonao atao koa ny mampiseho fa ny sasany amin'ireo mpifaninana aminao dia manomboka mivarotra bebe kokoa Source .